ဘီလျံနာ ကိုကို – မြန်မာသတင်းစုံ
ပိတောက် အကို့ကို အရမ်း လွမ်းနေတယ် အကို..” နှုတ်ခမ်းချင်း ငုံဟတ် စုတ်နေတဲ့အချိန် ပိတောက်က ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပစ်နေသလို သူလည်း ပိတောက်လိုဘဲ သူ့အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ နှစ်ယောက်စလုံး မိမွေးတိုင်း ကိုယ် ခန္ဒာတွေနဲ့ အနားက နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖါပေါ်ကို ရောက်သွားကြသည် ။ အငမ်းမရ နမ်းစုတ် ပွတ်သပ်မှုတွေနဲ့ဆိုဖါရှည်ကြီးပေါ်မှာ ပိတောက်ခင်နဲ့သူ လုံးထွေး လူးလွန့်နေကြသည် ။ ပိတောက်ခင်က သူ့လိင်တန်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ထိပ်ဖူးနီညိုညိုကြီးကို ငုံဟတ်လိုက်သည် ။ ပိတောက်ခင်ရဲ့ လျာလေးက သူ့ဒစ်ဖျားကို ပတ်ချာလှည့် ကလိနေသည် ။ “ အိုး…ဟင်းဟင်း…..အိုး….ရှီး…….” ပုလွေ တအားကောင်းတဲ့ ပိတောက်ခင်ရဲ့ အမှုတ်တွေကြောင့် သူခဏချင်းနဲ့ ပြီးလုလု ဖြစ်သွားရသည် ။ “ တော်တော့ ပိတောက်….ရပ်တော့…..” ပိတောက်ခင်က မရပ်ချင် ရပ်ချင်နဲ့ ရပ်လိုက်သည် ။ “ ဘာလို့လဲ အကို..မကောင်းဘူးလား…..” “ အာ..တအားကောင်းလို့ ပြီးသွားမှာ စိုးလို့..” “ ပြီးလိုက်ပေါ့ အကို…အကို့ကို ကောင်းစေချင်တာ..” “ ဟင့်အင်း..ပိတောက် လိုချင်နေတာ အကို သိတယ်…ပိတောက် ကောင်းအောင်လည်း အကို လုပ်ပေးချင်တယ် ….” ပိတောက်ခင်ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ပြီး အားနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ထည့်သည် ။
ပိတောက်ခင်က “ ဆောင့်..အကို..ဆောင့်..ကောင်းတယ်..တအားကောင်းတယ်….” လို့ သူ့ကို ပြောတဲ့အတွက် သူ စိတ်ရှိလက်၇ှိ ဆောင့်လုပ် ပစ်လိုက်သည် ။ ပုံစံပြောင်း ချင်လာလို့ ပိတောက်ခင်ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး ဖင်ထောင်ကုန်းပေးလိုက်တဲ့ ပိတောက်ခင်ရဲ့ ဖင်တုန်းတွေ ကြားထဲက ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲကို သူ့ဒုတ်ကို ထိုးသွင်းရင်း ဆောင့်ပြန်သည် ။ တုန်ခါနေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လှမ်းဆုပ်ဆွဲပြီး ဆောင့်သည် ။ “ အား..အင်း..အင်း…အင်း…..အီး…ရှီး….ကောင်းတယ်..ဆောင့်…ဆောင့်….” နောက်တခါ ပုံစံပြောင်းချင်တာက ပိတောက်ခင် ..။ “ အကို..ပိတောက် အပေါ်ကနေ လုပ်ချင်တယ်….” ဒီတခါ အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်တာက ပိတောက်ခင် ..။ မြင်းစီးတဲ့ ကောင်းဘွိုင်မလေး လို တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ဆောင့်နေတဲ့ ပိတောက်ခင်ရဲ့ နို့လှလှကြီးတွေက လှုပ်ခါနေကြသည် ။ ဒီနို့ကြီးနှစ်လုံးကို သူ့လက်တွေက ဖမ်းကိုင်ဆုပ်မိရသည် ။ အောက်ကနေ ကော့ပင့် ထိုးပေးမိသည် ။ ပိတောက်ခင် ပြီးသွားတာကို သူတွေ့လို့ သူလည်း သူ့ဒုတ်ကို ပိတောက်ခင် အဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။ “ အကို ပြီးအောင် လုပ်လေ…” သူ ပိတောက်ခင် ပါးစပ်ထဲကို သူ့ဒုတ်ကို ထိုးထည့်လိုက်သည် ။ ပိတောက်ခင် သဘောပေါက်သွားသည် ။ သူ့ကို အပီ စုတ်ပေးတော့တာဘဲ ..။ ပိတောက်ခင်က စုတ် သူက ထိုးညှောင့်နဲ့ မကြာခင် သူ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်မိသွားပြီး ပြီးခြင်းကို ရောက်သွားရသည် ။ ပိတောက်ခင်က သုတ်ရည်တွေကို မြိုချပစ်လိုက်သည် ။ အား…..ကောင်းလိုက်တာ ပိတောက်ရယ်….။ ဆိုဖါပေါ်မှာဘဲ မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ပိတောက်ခင် ဘယ်အချိန်က ထသွားပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားသလဲ သူ မသိ ။ ရေသံလိုလို ကြားလို့ သူဖျတ်ကနဲ နိုးသွားရပြီး နံရံက နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ညနေ ၅နာရီ ကျော်နေပြီ ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။
မဏိကို ခေါ်ပြီး မာမီတို့ အိမ်ကို ထမင်းသွားစားရမှာကို သတိရလိုက်သည် ။ စန်းစန်းရီ အလုပ်က အပြန် ကားဂိတ်မှာ ကားစောင့်နေတဲ့အချိန် ကုဋေတိုးပွားဆီက “ အရမ်းလွမ်းတယ် ” ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့လေး ၀င်လာသည် ။ စန်းစန်းရီ သူနဲ့ မိန်းမချောလေးတယောက်ကို နေ့လည်က မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို အခုတိုင် မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ယောင်နေသည် ။ သူ့ကို သံယောဇဉ် ရှိချင် သလိုလို ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်တွေတောင် သူ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ပြောင်းလဲချင်သလိုလို ဖြစ်လာသည် ။ စန်းစန်းရီကို အတူ အလုပ်လုပ်တဲ့ မလတ်ကလည်း ကုဋေတိုးပွားကို မြင်လိုက်ရင် သူ့ဘေးနားမှာ မော်ဒယ်လ်လို အချောအလှလေးတွေ တယောက်ယောက်တော့ အမြဲ ပါနေတတ်တယ်..လို့ ပြောဘူး တယ် ။ ဒီလိုလူကို ချစ်မိလိုက်ရင် တနေ့ ကိုယ်ဘဲ ရင်ကွဲပက်လက် ဖြစ်ရမှာ သေချာနေတယ် လို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယူဆမိလိုက်တယ် ။ ဘီလျံနာကြီးကို မချစ်ချင်..မချစ်ရဲတော့ပါဘူး…။ သူ့အကူအညီတွေ ယူထားမိတာ ကလည်း မနည်းဘူး ။ ဒီ အကူအညီတွေကြောင့် မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး သူ့အချစ်ကို လက်ခံလိုက်ရမှာလား ။ ဒီအတိုင်း ဆိုရင်တော့ အဲလိုကြီး ဖြစ်တော့မယ် ။ လတ်တလော ပြန် ကျန်းမာလာတဲ့ အမေ့ကိုလည်း ဒီတိုက်ခန်းကောင်းကြီးကနေ ပြန် မဆင်းစေချင်တော့ဘူး ။ အဓိက က အမေ့ စိတ်နှလုံးကို မထိခိုက်စေချင်ဘူး ။
ဘ၀တလျှောက်လည်း ကံဆိုးမ သွားလေရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ ဆိုသလိုဘဲ အမေလည်း ကံမကောင်းခဲ့ဘူး ။ အမေ့ကို နားနားနေနေ စိတ်အေးအေးနဲ့ တရားအားထုတ်စေချင်ပြီ ။ ဘတ်စ်ကားကလည်း ဘာကြပ်သလဲ မမေးနဲ့ ။ အရေးထဲ အနောက်ကနေ လိုက်ထောက်တဲ့လူကလည်း ရှိသေးတယ် ။ မသိမသာ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ နှုတ်ခမ်းမွေးကားကား ဘိုက်ပူပူနဲ့ကတုံးကြီး တယောက် ဖြစ်နေတယ် ။ သူ့အသက်အရွယ်မှ အားမနာ ..။ သူ့ချွေးနံ့ကလည်း မခံနိုင်လောက်အောင် ပြင်းသည် ။ ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင် မရောက်ခင်မှာဘဲ ဆင်းပစ်လိုက်မိသည် ။ အိမ်ရောက်ဖို့ နဲနဲ ဝေးသေးပေမယ့် လမ်းဘဲ လျှောက်လိုက်ချင်သည် ။ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အထဲ အနောက်ကနေ တုတ်တိုကြီးနဲ့ ဖင်ကြားထဲ လိုက်တေ့နေတာ ရွံလိုက်တာ ။ သိပ်ကို ဈေးကြီးတဲ့ အကောင်းစား ကွန်ဒိုတိုက်ကြီးမှာ စန်းစန်းရီကို ကုဋေတိုးပွားက နေခိုင်းတာ ။ ပရိဘောဂကလည်း အစုံ ပါပြီးသား ။ ဒါတွေကို စန်းစန်းရီ ဘယ်လို ပြန်ဆပ်မလဲ ..။ မဆပ်နိုင်တော့ သူ့ရင်ခွင်ထဲကို လက်မြှောက် အရှုံးပေးပြီး သက်ဆင်းလိုက်ရတော့မှာလား ။ “ အမ…အမ ….” အနောက်ကနေ ခေါ်သံကြောင့် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ထီစာအုပ်လေးတွေ လက်က ကိုင်ပြီး လိုက်ရောင်းတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်နေသည် ။ “ ထီ လေး ထိုးသွားပါလားဟင်..အမ….” စန်းစန်းရီ ထီ တခါမှ မထိုးဘူးပါ ။ ကိုယ့် ဘ၀မှာ ဒီလောက် ကံဆိုးနေတော့ ဘယ်တော့မှလည်း ပေါက်မယ် မထင်ဘူး ။
ကုဋေတိုးပွားကို တင်နေတဲ့ အကြွေတွေကို ပြန်ဆပ်နိုင်ဖို့ ငါ ထီ စမ်းထိုး ကြည့်လိုက်မယ် လို့ စဉ်းစားမိလိုက်သည် ။ စိတ်ထဲမှာ သူတပါး အကူအညီတွေကို မတတ်သာလို့ ယူခဲ့ရတဲ့အတွက် ဒီအကြွေးများကို ပြန်ပေးဆပ်ချင်နေတာကြောင့် ကျမ ထီပေါက်ရပါလို၏ လို့ ဆုတောင်း တိုင်တည်လိုက်မိပြီး ထီတအုပ်ကို ၀ယ်လိုက်သည် ။ “ အမ..ဖုန်းနံပါတ်လေး ရေးပေးခဲ့ပါ..ပေါက်ခဲ့ရင် ကျနော် အကြောင်းကြားပါမယ်…..” စန်းစန်းရီ ဒီအချိန်က စပြီး ထီပေါက်ပါစေ ဆုတောင်းပြီ ။ မဏိရဲ့ ခြံရှေ့မှာ သူ့ကားရောက်တာနဲ့ မဏိ ပြေးထွက်လာသည် ။ အနက်ရောင် ချည်သား အင်္ကျီပွပွလေး နဲ့ အနက်ရောင် ပြောင်ထမိန်လေးနဲ့ မဏိသည် သူမရဲ့အသား ဖွေးဖွေးနဲ့ လိုက်ဖက်နေသည် လို့ သူ ထင်မိသည် ။ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ သူ့ကားပေါ် တက်လာတဲ့ မဏိသည် သူ့ကို “ ဘာကြည့်တာလဲ..မမြင်ဘူးတာ ကျနေတာဘဲ..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ “ နင် အရမ်း လှနေလို့ပေါ့ မဏိရယ်….” လို့ သူပြောလိုက်ပြီး မဏိရဲ့ လက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသည် ။ “ အံမယ်..လူကို မြှောက်ပြောနေပြန်ပြီ….” “ တကယ်..ငါ နင်နဲ့ ဟိုဒင်း ဖြစ်ပြီးကထဲက နင့်ကိုဘဲ သတိရနေမိတယ်..ယုံ….” “ အိုး..အဲဒီအကြောင်း မပြောနဲ့ကွာ..ရှက်တယ်….” မဏိလက်ကလေးကို တင်းတင်း ဆုပ်လိုက်မိသည် ။
“ နင်နဲ့ ထပ် လုပ်ချင်သေးတယ်…” “ အိုး..ကုဋေနော်..မပြောပါနဲ့ဆို….” “ နင် အရမ်းလှတာဘဲ..မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်နေတယ်..” “ ဟိတ်..တော်ဆို…ကုဋေနော်..ငါ ဒါဆို နင်နဲ့ မလိုက်တော့ဘူး..ကား ရပ်လိုက်ဟာ….” “ စတာပါ မဏိရယ်…..ဟားဟားဟား…” မဏိက သူ့ပုခုံးနဲ့ လက်မောင်းတွေကို လက်သီးဆုပ်လေးတွေနဲ့ ထုသည် ။ မာမီတို့ ခြံရှေ့ကို ရောက်သွားကြတာနဲ့ ကြိုတင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုပုလေးက ခြံတံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တာကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ သွားဖြည်းပြနေတဲ့ ကိုပုလေးကို လက်ပြ နုတ်ဆက်လိုက်ပြီး လမ်းကွေ့လေးကို ကွေ့ပတ်မောင်းပြီး တိုက်အိမ်ကြီးဆီကို သူ မောင်းသွားလိုက်သည် ။ အိမ်ရှေ့ တံခါးပေါက်ကြီး အပြင်ကနေ ကိုထွန်းစာက ထွက်ကြိုနေသည် ။ “ ဟား..မဏိစန္ဒာ ပါ ပါတာကိုး…. တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ် မဏိရေ….မတွေ့တာ ကြာပြီနော်…..” “ ဟုတ်တယ်..ဦးလေးကိုထွန်းစာ….” ကိုထွန်းစာသည် သူနဲ့ မဏိတို့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် ကြိုပို့ပေးနေတဲ့လူ ဖြစ်သည် ။ အိမ်ထဲ ၀င်ခဲ့ကြတော့ သူ့ကို ပြာပြာသလဲ ဘာစားမလဲ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ လို့ ၀ိုင်းမေးမြန်းကြတဲ့ ဒီအိမ်ကြီးက ၀န်ထမ်း အလုပ်သမားတွေ ကို မာမီကော..လို့ သူ မေးလိုက်သည် ။ “ ရှိပါတယ်..သား…အတွင်း ဧည့်ခန်းမှာပါ….” လို့ သူ့ကို အမြဲ ချက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ဒေါ်ဖြူ က ဖြေလိုက်ရင်း အတွင်းဖက် ဧည့်ခန်းကို ဦးဆောင် ခေါ်သွားကြသည် ။ မာမီနဲ့ ဒက်ဒီက ဆိုဖါပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း စကားပြောနေကြရာက မဏိကို မြင်လိုက်တော့ အရမ်း အံ့သြသွားကြပြီး ထိုင်ရာကနေ ထပြီး မဏိကို ပြေးဖက်လိုက်ကြသည် ။
“ သမီး ပါလာမယ် ဆိုတာ အန်တီတို့ မသိဘူး….သမီးနဲ့ မတွေ့တာ ကြာပြီကွာ…၀မ်းသာလိုက်တာ….” ဒက်ဒီကလည်း “ သားတို့ သမီးတို့နဲ့ ဒီညနေ ထမင်း အတူတူ စားကြရမှာ ၀မ်းသာတယ်ဟေ့….အင်း..မြေးချီရဖို့ နီးလာပြီ ထင်ရတာဘဲ…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဧည့်ခန်းမှာ ခဏ ထိုင်ကြပြီး ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ထိုင်ပြောကြသည် ။ ဒေါ်ဖြူတို့က ထမင်းစားပွဲ အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ လို့ လာပြောလို့ သူတို့ ထမင်းစားခန်းထဲကို သွားလိုက်ကြသည် ။ ထမင်းစားပွဲ အရှည်ကြီးမှာ အသားငါး ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဟင်းတွေ အသုပ်တွေ အကင်တွေ က စုံလှသည် ။ “ ကဲ သားတို့ သမီးတို့ စားကြ..ပြီးရင် သား ဒီမှာ မနေတော့ပေမယ့် သား နေခဲ့တဲ့ အခန်းကို သား ရှိတုံးကအတိုင်း မာမီတို့ ထားထားပေးတာ အိမ်အပေါ်ထပ်ကို တက်ကြည့်လိုက်ကြအုံး….” လို့ မာမီက ပြောသည် ။ ထမင်းစားပြီးတော့ သစ်သီးမျိုးစုံနဲ့ ကိတ်မုန့်အမျိုးမျိုး လည်း ဒေါ်ဖြူက စီမံထားသည် ။ မာမီတို့နဲ့ ခဧ ထိုင် စကားပြောကြပြီး အိမ်အပေါ်ထပ်က သူနေခဲ့တဲ့ အခန်းကို မဏိ နဲ့ သူ တက်ကြည့်ကြသည် ။ “ မဏိ..ငယ်ငယ်က နင်နဲ့ ငါ ငါ့အခန်းမှာ ဟိုဟာ လုပ်ကြတာ နင် မှတ်မိလား…” “ ဟိတ်..ဘာလဲ..ဘာလုပ်လို့လဲ..ကုဋေရယ်…သူများတွေ ကြားရင် တမျိုး ထင်လိမ့်မယ်..” “ ပုံအတူတူ ထိုင်ဆွဲကြတာလေ…..ဟားဟား….” မဏိက သူ့ကို လိုက်ထုပြန်သည် ။
သူနေခဲ့တဲ့ အခန်းထဲ ၀င်ခဲ့ကြသည် ။ သူခဲတန်နဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ မဏိရဲ့ မျက်နှာပုံ ပန်းချီကားလေး နံရံမှာ ကပ်ထားနေဆဲ ..။ မဏိက ဒီပုံလေးကို တွေ့တော့ မျက်နှာလေး ပြုံးသွားသည် ။ “ ကုဋေ..နင်က ငယ်ငယ်က ပန်းချီဆွဲ သိပ်တော်တာဘဲနော်….ငါ့ပုံကို ဆွဲတာ တော်တော့်ကို တူတယ်….” “ မဏိ….” “ ဘာလဲ….” “ နင် က ဒေါင်းမျိုးဘဲ…” “ ဘာ..ဘာဒေါင်းမျိုးလဲ..” “ နင်ကလည်း..ဒေါင်းတွေက ကြီးလေ လှလာလေ တဲ့….နင်လည်း ကြီးလာတော့ ပို လှလှလာတယ်….ဒီမှာ ကြည့်လေ…လှလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကြီးတွေ…၀ှူး…” မဏိရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို သူ ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ပြောလိုက်တာပါ ။ “ အိုး..သူများ တွေ့မယ်…” “ မတွေ့အောင် ငါ တံခါး ပိတ်ထားပြီးပြီ..မဏိ…ကဲလာ…” “ ဘာလဲ..ဘယ်သွားမလို့လဲ…” “ ငါ့ကုတင်ပေါ်ကို….” “ အို…” မဏိကို သူ ငယ်ငယ်က အိပ်ခဲ့တဲ့ ကုတင်ကြီးပေါ်ကို ဆွဲလှဲချလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်း ထူထူအိအိတွေကို ဖိကပ်စုတ်လိုက်သလို ၀တ်ထားတဲ့ ချည်သား အနက်ရောင် ဘလောက်စ် လေးရဲ့ နှိပ်ကြယ်သီးတွေကို တထောက်ထောက်နဲ့ ဆွဲဖွင့် ဖြုတ်လိုက်သည် ။ မဏိက သူ့ကို ချက်ချင်းဘဲ ပြန်ဖက်သိုင်းပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုပြန်စုတ်သည် ။
ဘလောက်စ်လေး ပွင့်သွားတဲ့အချိန် ဘရာစီယာ အနက်ရောင်လေးထဲက အတင်းကြီး ရုန်းကန်ထွက်ချင်နေကြတဲ့ ၀င်းမွတ်တဲ့ ရင်စိုင်ကြီးတွေရဲ့ အပေါ်ပိုင်း ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေကို မြင်လိုက်ရတော့ သူ့စိတ်တွေ ပိုပြီး ပြင်းထန်ပေါက်ကွဲသွားရသည် ။ ဘရာစီယာလေးကို ဖြုတ်ချွတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ မဏိက သူ့လိုဘကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည် ။ ဘရာစီယာကို ချိတ်ဖြုတ်ပြီး ချွတ်ပေးလိုက်သည် ။ လှလွန်းတဲ့ ရင်သားကြီးတစုံကိုဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ ရင်သီးနီနီလေးတွေကို သူ အငမ်းမရဘဲ စို့မိသည် ။ နို့တွေကို ဘယ်ညာတဖက်ပြီးတဖက်စို့နေတဲ့အချိန် သူ့လက်တွေက မဏိရဲ့ ထမိန်ပျော့လေးကိုပါ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ “ ကုဋေရယ်…ငါတို့ လုပ်ပေါက် ကောင်းရဲ့လားဟာ..နင့်မိဘအိမ်ကို လာလည်ပြီး အခုလိုကြီး…” “ မဏိရယ်.မပူစမ်းပါနဲ့..ဒါ ငါ့အခန်းပါ ..” သူ့ကိုယ်ကို အောက်ဖက်ကို လျောဆင်းသွားလိုက်တာကြောင့် သူ ဘာလုပ်တော့မည်ကို သိလိုက်တဲ့ မဏိက “ ကုဋေ….နင်..မရွံဘူးလားဟာ….” လို့ တုန်တုန်ရီရီနဲ့ မေးလိုက်သည် ။ “ ဟင့်အင်း….နင့်စောက်ပတ်ကို ငါ တအားကြိုက်တယ်ဟာ….နင့်စောက်ပတ်က တအားလှတယ်….” “ အာ..အဲဒါက လှတယ်လို့များ ရှိသေးလို့လား….” သူ မဏိကို စကား မပြန်တော့ ။ သူ့မျက်နှာကို မဏိရဲ့ အင်္ဂါစပ်လှလှကြီးမှာ အပ်ပြီး အကွဲကြောင်း နီညိုညိုကြီး တလျောက် လျာနဲ့ ဖိဖိယက်ပေးလိုက်သည် ။
“ အို…ဟင်း…..အိုး…..အား..ရှီး……..ကုဋေရယ်……အို…ဟာ……အား……..” မဏိ တအား ယက်နေတဲ့ သူ့ခေါင်းကို တွန်းပစ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် သူက မဏိရဲ့ ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲဖက်ချုပ်ထားတာကြောင့် မဏိ ရုန်းထွက်လို့မရဘဲ သူ ယက်သမျှကို ခါးလေးကော့ပြီး ခံနေရသည် ။ ထောင်ပြီး ထကြွနေတဲ့ အစိလေးကို လျာနဲ့ ထိုးဆွလိုက် ယက်လိုက် လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ မဏိက တော်ပြီ..ဆက်မခံနိုင်တော့ဘူး…ချစ်ပေးပါတော့လို့ တောင်းခံလာရတော့သည် ။ မဏိရဲ့ ပေါင်ကြားဂွဆုံကနေသူ့မျက်နှာ ခွာလိုက်ပြီး မဏိကိုယ်ပေါ်တက်မှောက်ခွ မဏိပေါင်တန်တွေအကြား နေရာဝင်ယူပြီး သူ့ပစ္စည်းကို လိုလားတောင့်တနေတဲ့ မဏိရဲ့ ပစ္စည်းထဲ ထိုးသွင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှ မဏိက “ နင့်ကို ငါ သိပ်ချစ်တယ် ” လို့ပြောရင်း တအားဖက်လိုက်သည် ။ သူ့ပစ္စည်းက မဏိ အထဲကို တင်းကြပ်စီးပိုင်စွာနဲ့ တအိအိ နဲ့ ၀င်သွားသည် ။
“ အို…..ကုဋေ….အာ…..အိ……..” ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်း ဆွဲနုတ်တာတွေကို သူ့ကိုရော မဏိကိုရော ကောင်းလွန်းတဲ့ ကာမအရသာထူးတွေကို ပေးစွမ်းနေတာကြောင့် လုပ်ရင်းလုပ်ရင်း ပိုပို မြန်ဆန် သွက်လက်လာသည် ။ “ မဏိ ..နင် အိုကေတယ်နော်….” “ အင်း..အင်း….ရတယ်..” “ ငါ မြန်တော့မယ်…” “ အင်း..အင်း….” မြန်ပြီး စိပ်တဲ့ ဆောင့်ချက်များကြောင့် မကြာခင်မှာဘဲ သူရော မဏိရော လမ်းဆုံးကို တက်လှမ်းသွားကြရတော့သည် ။ မဏိက သူ့နားနားကို နှုတ်ခမ်းလေး ကပ်ပြီး..“ ငါသိပ်ကြိုက်တယ်ကွာ..” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည် ။ ညက မာမီတို့ဆီက ပြန်ပြီး မဏိကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့တော့ ၁၁နာရီထိုးနေပြီ ။ ဒီနေ့ ငယ်ငယ်က အခန်းကို ပြန်တက်ကြည့်ရင်း မဏိနဲ့ အချစ်စခန်းဖွင့် ဖြစ်သွားရတာ မထင်မမှတ်ဘဲ ဖြစ်သွား တာ ။ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး အီးမေး ဖွင့်စစ်နေတုံး မဏိ ဖုန်းခေါ်သည် ။ မဏိက သူ့ကို “ ကုဋေ..နင် ချစ်ဦးမောင်ကို တ ခုခု လုပ်လိုက်သလား..ချစ်ဦးမောင် အခု ဆေးရုံတက်နေရတယ် ..” လို့ မေးလို့ အံ့အားသင့်သွားရသည် ။ “ ငါက ဘာလုပ်ရမှာလဲ..မဏိ နင် ငါ့ကို လူမိုက် ထင်နေလို့လား…နင်နဲ့သူနဲ့ ဖြစ်ကြတာနဲ့ ငါက သူ့ကို ဘာ လုပ်ရမှာလဲ..” လို့ သူပြန်မေးလိုက်သည် ။ မဏိက “ သူ့ကို လူတစုက ၀ိုင်းပြီး ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်လို့ ဒါဏ်ရာအကြီးအကျယ် ရသွားတယ်တဲ့ ..” လို့ ပြော ပြသည် ။
“ လူတွေက နင့်လက်ချက်လို့ ထင်ကြတယ် တဲ့..” “ ငါ ဒါမျိုးတွေ မလုပ်ဘူး…မဏိ …ဘယ်တုံးက ဖြစ်တာတဲ့လဲ….” “ ဒီနေ့ ညနေပိုင်းက တဲ့..” “ ငါနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး..မဏိ…နင်နဲ့ မနက်ဖန် ထပ်တွေ့ချင်သေးတယ်ဟာ…” “ တကယ်လား….ကုဋေ…” “ အင်း..တကယ်…..ကဲ မနက်ဖန်ကျ ငါ ဖုန်းခေါ်မယ်….မဏိ….” “ အိုကေ….ဂွတ်နိုက်နော်…” “ ဂွတ်နိုက် မဏိ ..” မဏိနဲ့ ဖုန်းပြောအပြီး ရေချိုးဖို့ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေ အကုန်လုံးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ခါးမှာ မျက်နှာ သုတ် တဘက်ကြီး ပတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းရှိရာကို သူ လျှောက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့အခန်းတံခါးရဲ့ လူခေါ် ဘဲလ် တတင်တင် နဲ့ မြည်လာသည် ။ အချိန်မတော်ကြီး….ဘယ်သူပါလိမ့် …။ အခန်းတံခါးဆီကို လျှောက်သွားလိုက်ပြီး ချောင်းကြည့်ပေါက်လေးကနေ ကြည့်လိုက်တော့ စိန်ခြယ်မဲသန့် ဖြစ်နေ သည် ။ ဒီအချိန်ကြီး စိန်ခြယ် ဘာလာလုပ်ပါလိမ့် ။ တံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ စိန်ခြယ်မဲသန့်လက်ထဲမှာ အထုပ်တွေ ဆွဲလို့ ၀င်လာသည် ။ “ စိန်ခြယ်..ဘာလာလုပ်သလဲ….ဘာအကူလိုလဲ..” စိန်ခြယ်မဲသန့်က တဘက်ခါးပတ်ထားတဲ့ သူ့ကို သေသေချာချာ စူးစိုက်ကြည့်နေသည် ။
“ အကူအညီမလိုဘူးဆရာ….ဆရာ ကူညီခဲ့တာကြောင့် စိန်ခြယ့်အခက်အခဲတွေ အကုန် ပြေလည် အဆင်ပြေ ခဲ့ပြီ….အခု စိန်ခြယ် လာခဲ့တာက ဆရာ့ကို ကျေးဇူးဆပ်မလို့….” “ စိန်ခြယ်..မလိုဘူး..မလိုဘူး..ပြန်တော့..ညနက်နေပြီ…..” “ ဟင့်အင်းဆရာ…စိန်ခြယ့်ကို မနှင်နဲ့..မပြန်ဘူး ….ဆရာ့ကို ပြုစုပေးချင်နေတာ…” “ ဟာ..မလိုဘူး……စိန်ခြယ်…..ကျနော်လည်း ရေချိုးမလို့….လုပ်နေတာ…” “ ဆရာ့ကို စိန်ခြယ် ရေချိုးပေးမယ်လေ …. ” စိန်ခြယ်က အခန်းထဲကို ၀င်လာပြီး တံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်သည် ။ အိုး….စိန်ခြယ်……။ စိန်ခြယ်မဲသန့် သူ့လက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး ရေချိုးခန်းဆီကို ဆွဲခေါ်သွားလိုက်သည် ။ တုန်ခါလှုပ်နေတဲ့ တင်ပါးကြီး တွေကို ကြည့်ရင်း သူ လိုက်ပါသွားရသည် ။ ပြုံးစိစိနဲ့ စိန်ခြယ်မဲသန့် သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေပြီး ဖျတ်ကနဲ သူ့ခါးမှာ ပတ်ထားတဲ့ တဘက်ကြီးကို ဆွဲဖြုတ်ချ လိုက်သည် ။ “ ဟေ့….” သူ့တကိုယ်လုံး ဗလာကျင်းသွားရသည် ။ စိန်ခြယ်မဲသန့် သူ့အရှေ့မှာ ဒူးလေးထောက်ကာ ထိုင်ချလိုက်သည် ။ ရှေ့ကို ငေါငေါကြီး ထိုးထွက်ပြီး မာကြောစပြုနေတဲ့ သူ့လိင်တန်ချောင်းကြီးကို သူမ လက်ကလေးတွေက ဖွဖွ လေး ကိုင်တွယ်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းထူထူပြဲပြဲလေးထဲ ငုံကာ စုတ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့သည် ။
“ စိန်ခြယ်….မမှုတ်နဲ့အုံး..ရေ အရင် ချိုးလိုက်ရအောင်….” စိန်ခြယ်မဲသန့်က ပြုံးပြုံးလေး ခေါင်းလေးညှိမ့်ပြပြီး သူမ အ၀တ်တွေကို တခုပြီးတခု ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ အ၀တ် ဆိုလို့ ချည်တမျှင်တောင် မကျန်တော့တဲ့အခါ သူ့လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ဆွဲပြီး ရေချိုးကန်က ရေပန်းခလုပ်ကို လှည့်ဖွင့်လိုက်သည် ။ ရေပန်းက ရေတွေ တဖွားဖွား တဝေါဝေါ ကျနေတဲ့ အောက်ကို သူနဲ့ စိန်ခြယ်တို့ လှမ်းဝင်လိုက်ကြသည် ။ တင်းမာဆူလုံးနေတဲ့ စိန်ခြယ်ရဲ့ ရင်သားစိုင်လှလှကြီးတွေက ရေချိုးကြွေကန်ထဲကို လှမ်းဝင်လိုက်ချိန် တုန်ခါလှုပ် သွားကြသည် ။ တင်းမာထောင်ထနေတဲ့ ရင်သီးလေးတွေကို သူ့လက်ဖ၀ါးနဲ့ အသာ စမ်းလိုက်မိတဲ့အချိန် စိန်ခြယ်ကလည်း သူ့ဖွားဖက်တော်ကို လာစမ်းလိုက်တာကို ခံရသည် ။ “ အကြီးကြီးဘဲ..တုတ်လိုက်တာ…” စိန်ခြယ်က သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ်ကြည့်နေသည့်အချိန်မှာ သူကလည်း စိန်ခြယ်ရဲ့ ရင်သီးမာမာလေးတွေကို လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကို သုံးပြီး ချေနယ်မိသည် ။ သူ့တကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာရည်မြှုပ်တွေနဲ့ ပွတ်တိုက်ပြီး စိန်ခြယ်က ရေချိုးပေးပြီးနောက် သူ့ကို ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှဲစေပြီး စိန်ခြယ်က “ ဆရာ့နားမှာ မိန်းမလှလေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေလို့ ကျမက ဆရာ့အတွက် သိပ် အထူးအဆန်း မဟုတ်ပေမယ့် ကျမကျေးဇူးရှင် ဆရာ့ကို ကျမ တတ်စွမ်းသမျှ ကျမမှာ ရှိတာတွေနဲ့ ပြုစုပေးပါရစေ”…လို့ ပြောရင်း သူ့ဖွားဖက်တော်ကို စိန်ခြယ်က ကျကျနန စုတ်ပေးသည် ။ စိန်ခြယ်ရဲ့လျာကလေးက သူ့ဒစ်ထိပ်ဖျားကို ပီပီပြင်ပြင် လှည့်ပတ်ရစ်သိုင်း ကစားနေတာတွေက သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ တ ခုလုံး ကျင်ထုံ တုန်လှုပ်သွားရအောင် ကောင်းလွန်းလှသည် ။
“ အိုး…..အား..ရှီး……ရှီး…..ကောင်းလိုက်တာ စိန်ခြယ်ရယ်……အိုး……..အား……ရှီး…..” သည်အတိုင်း ဆက်မှုတ်နေရင် သူ ပြီးသွားနိုင်သည် ။ “ စိန်ခြယ်…တော်လိုက်တော့….မပြီးလိုက်ချင်သေးဘူး….” စိန်ခြယ့်ကို အမှုတ် ရပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ စိန်ခြယ်က သူ့လိင်တန်ကို သူမပါးစပ်ထဲက ထုတ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ လက် ကလေးနဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်လိုက် ဆုပ်နယ်လိုက် ကစားပေးနေပြီး ဖျတ်ကနဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက်လိုက်သည် ။ သူ့လိင်တန်အပေါ်မှာ ဖင်ကြီးတွေ ကြွပြီး ခွထိုင်ရင်း လက်ကလေးနဲ့ လိင်တန်ခေါင်းကို ဆွဲကာ သူမ အဖုတ်ရဲ့ အပေါက်မှာတေ့ပေးလိုက်သည် ။ပြီးတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိထိုင်ချသည် ။ “ ဟင့်…အင်း……….ရှီး….အား……” စိန်ခြယ့်မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့သွားသလို နှုတ်ခမ်းလှလှလေးတွေ တွန့်သွားကြသည် ။ လိင်တန်သည် အင်္ဂါစပ်အတွင်းထဲ တိုးမြုပ်ဝင်သွာသည် ။ အတွင်းသားနုနုလေးတွေကို ပွတ်တိုက်ရင်း တထစ်ထစ်နဲ့ ၀င်သွားနေသည် ။ ကြွလိုက် ဖိချလိုက် ။ စိန်ခြယ့် တင်ပါးကြီးတွေ ကြွလိုက် ချလိုက်နဲ့ ။ တငြိမ့်ငြိမ့် တသိမ့်သိမ့်နဲ့ စိန်ခြယ်က သူ့အပေါ်ကနေ ခေါင်းလေး ဘယ်ညာ ရမ်းခါရင်း တကြွကြွနဲ့ လုပ်ကိုင်ပေးသည် ။ စိန်ခြယ့်ခါးလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပင့်ထိုးပေးလိုက်တဲ့အခါ စိန်ခြယ်ကလည်း ဖိချချိန်နဲ့ ဆုံမိသည် ။ “ အင်း…..ဟင့်……အား…..” စိန်ခြယ်လည်း အပေါ်ကနေ စိတ်ကြိုက် လုပ်ပြီးပြီမို့ ဒီတခါတော့ သူ့အလှည့် ။
စိန်ခြယ့် ခြေထောက်တွေကို သူ့ ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ပြီး အားနဲ့ ဆွဲပေးလိုက်သည် ။ တဖတ်ဖတ် အသံတွေနဲ့ စိန်ခြယ်ရဲ့ အော်သံတွေ သူ့အိပ်ခန်းထဲမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပေါ်နေသည် ။ စိန်ခြယ်ရဲ့ အင်္ဂါစပ် အတွင်းသားတွေက သူ့လိင်တန်ကို ရစ်ပတ်ဆွဲယူနေသလို ခံစားရသည် ။ စိန်ခြယ်လည်း တအား ကောင်းသထက် ကောင်းလာပုံရသည် ။ သူ့ကို မြန်မြန်နဲ့ ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်ဖို့ တောင်းခံတောင်းဆိုလာသည် ။ စိန်ခြယ့်စိတ်ကြိုက် အသားကုန် ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးနောက် မကြာခင် ကောင်းလွန်းတဲ့ ကာမ အရသာထူးတွေကို စိန်ခြယ်ရော သူရော အပြည့်အ၀ ရရှိခံစားသွားကြရပြီး လမ်းဆုံး ပန်းတိုင်ကို အတူတူလိုတက်လှမ်း ရောက်ရှိသွားကြရလေသည် ။ စန်းစန်းရီသည် ကုဋေတိုးပွားကို ထီပေါက်ခဲ့ရင် သူ့ကိုပေးစရာ အကြွေးတွေကို အကုန် ပြန်ဆပ်ပစ်လိုက်မည် လို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပေမယ့် တကယ့် လက်တွေ့မှာ ထီက ပေါက်မလာဘူး ။ သူ့ကို မပတ်သက်ချင်ဘူး သူ့ကို ပြန်မချစ်ချင်ဘူး ပြောနေပေမယ့် စန်းစန်းရီ သူ့ကို အမြဲ သတိရနေသည် ။ သူ အမေ့ကို ဆေးသွားကုပေးတာကလည်း နည်းတဲ့ ကိစ္စကြီး မဟုတ်ဘူး ။ ကွန်ဒိုအခန်းအသစ်ကလည်း အမေ့အတွက် အရမ်းကောင်းသည် ။အမေကလည်း သည်မှာ နေရတာကို ကြိုက်သည် ။ သူ့လိုလူကို သဘောကျပြီး လိုချင်တဲ့ မိန်းမတွေက မြန်မာပြည်မှာ အများကြီး ရှိနေမှာဘဲ ။ ငါက ဘာမို့လဲ ။
ငါ သိပ်များ ကြီးကျယ်ရာ ရောက်နေပြီလား ။ သူ ငါ့အပေါ် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တာတွေကို ကျေးဇူး တင်ဖို့ ကောင်းတယ် ။ သူ့အပေါ် ငါ တင်းတင်းမာမာ မဆက်ဆံသင့်ဘူး လို့လည်း တွေးမိရပြန်သည် ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ထိုင်နေရင်း သူ့အကြောင်းကို တွေးလာမိရပြန်သည် ။ သူ့ကို ငါလည်း အရမ်း စိတ်ဝင်စားနေတာပါဘဲလား ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ညာနေပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ စန်းစန်းရီ သူနဲ့ ဘန်ကောက် မြဘုရားမှာ အတူတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကို ခဏခဏဘဲ ဖွင့်ဖွင့်ကြည့်မိနေတာ ။ ဆင်းရမဲ့ မှတ်တိုင်ကို ရောက်လို့ စန်းစန်းရီ ဆင်းလိုက်သည် ။ နဲနဲ စောသေးသည် ။ ဆိုင်နားက လဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ ကော်ဖီတခွက် မုန့်တခုလောက် စားလိုက်မည် လို့ စဉ်း စားလိုက်မိသည် ။ တခါတလေ အလုပ်များရင် နေ့လည်စာတောင် မစားဖြစ်တတ်ဘူးလေ ။ လဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ ကို ၀င်ခါနီးလေး အနောက်ကနေ “ စန်းစန်းရီ..ဂွတ်ဒ်မောနင်း..” လို့ နုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ အသံကြောင့် စန်းစန်း ရီ လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။ သူ စန်းစန်းရီရဲ့ အနောက်မှာ ရောက်နေသည် ။
“ ဂွတ်ဒ်မောနင်းပါ..ဦးကုဋေ…” “ လဖက်ရည် သောက်မလို့လား…ကျနော်လည်း သောက်မလို့..” “ အရမ်းတိုက်ဆိုင်တာဘဲနော် …” “ ဘာတိုက်ဆိုင်တာလဲ …” “ အော်..ကျမ လဖက်ရည် သောက်ဖို့ ဆိုင်ထဲ ၀င်တဲ့အချိန်နဲ့ ဦးကုဋေ လဖက်ရည်သောက်ဖို့ ရောက်လာတာနဲ့” “ အဟင်း..ဟုတ်တယ်….ကျနော်က စန်းစန်းရီ အလာကို ချောင်းနေတာလေ…အဟဲ….ငတ်မရှက်..ကြိုက်မရှက် ဆိုတဲ့ စကား ရှိတယ်လေ…ကျနော်က ကြိုက်နေတာကို.” သူနဲ့ ထိုင်လိုက်ကြတဲ့အချိန် စားပွဲထိုး ကောင်လေးက ဘာစားမလဲ ဘာသောက်မလဲ လာမေးသည် ။ စန်းစန်းရီက လဖက်ရည် ချိုပေါ့တခွက် မှာလိုက်သည် ။ ပေါင်မုန့်မီးကင် ထောပတ်သုတ် ရော ။ သူက စန်း စန်းရီ မှာတဲ့အတိုင်း လိုက်မှာသည် ။ “ ဦးကုဋေ…ကျမတို့ဆိုင်က ယူနီဖေါင်းတွေ ချုပ်ပေးတာ အဆင်ပြေရဲ့လာဟင်…” “ ပြေတယ်..ပြေတယ်…အားလုံး ကောင်းပါတယ်…” “ လိုအပ်တာရှိရင် ပြောနော် …” “ အင်း..ပြောမယ်..အမေရော နေကောင်းလား …” “ ကောင်းပါတယ် . ..အမေက သူ့ကို မေးတယ် …ခဏခဏ..” “ အင်း..ကျနော်လည်း သတိရပါတယ်..ကျနော် လာခဲ့ဦးမယ်..အမေ့ဆီ…” လဖက်ရည်နဲ့ မုန့် လာချလို့ သောက်စားလိုက်ကြသည် ။
“ စန်းစန်းရီ…” “ ရှင်…” “ ဘတ်စ်ကားနဲ့ အလုပ်လာတာ ပင်ပန်းလိုက်တာဗျာ..ကျနော်…ကား နဲ့ ကြိုပေးပို့ပေးချင်တယ်..လက်ခံမလား..” “ မလုပ်ပါနဲ့…ကျမ ဒီအတိုင်းဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်…” “စန်းစန်းရီက ခက်တယ်ဗျာ..ကျနော့်ကို တစိမ်းတယောက်လိုဘဲ..သဘောထားတုံးလား…” “ဘယ်လို သဘောထားစေချင်လို့လဲ….” ပြောပြီးမှ ငါမေးလိုက်တာကြီးက သူ့ကို ရေလာမြောင်းပေး လုပ်လိုက်သလိုများ ဖြစ်သွားမလား..စိတ်ပူသွားသည် ။ “ ကျနော်က ကျနော်တို့ တကယ့် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အဆင့်ကို ရောက်နေပြီ ထင်လို့…” “ ကျမ သူ့ဆီက အကူအညီတွေ ယူခဲ့တာဘဲ…တကယ်…အများကြီး..ယူခဲ့တာ…အလုပ်လာတာဖို့ အတွက်က ဘတ်စ်ကားနဲ့ အဆင်ပြေနေလို့ မလိုအပ်လို့ ပြောတာပါ…” “ အင်းလေ..စန်းစန်းရီ သဘောပါဘဲ …ကား လိုအပ်ရင် အချိန်မရွေး ပြောပေါ့…ဒါနဲ့ ညနေ အလုပ်က အပြီး…ကျနော်နဲ့ တွေ့နိုင်မလား…ညနေစာတနေရာရာမှာ စားမယ်လေ ..” စန်းစန်းရီလည်း သူဖိတ်ခေါ်တာကို မငြင်းမိဘူး ။ သူ့ကိုလည်း စန်းစန်းရီ တွေ့ချင် စကားပြောချင်နေမိသည် ထင်သည် ။ စန်းစန်းရီ လက်ခံလို့ သူပျော်သွားပုံ ရှိသည် ။ “ ဘယ်အချိန်လောက် လာခေါ်ရမလဲဟင်…” “ ကျမ ခြောက်နာရီ လောက်မှ အလုပ် ပြတ်မယ် ထင်တာဘဲ…” “ အိုကေ..ကျနော် ခြောက်နာရီ လာခဲ့မယ်…” စန်းစန်းရီ ဆိုင်ထဲကို ၀င်သွားလိုက်သည် ။ ရုံးခန်းကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ အလုပ်တွေက သူ့ကို စောင့်နေသည် ။ မနေ့ညဦးပိုင်းမှာ မဏိနဲ့ ကဲခဲ့ပြီး ညနက်ပိုင်းမှာ စိန်ခြယ်နဲ့ ကဲခဲ့လို့ အလုပ်ခွင်မှာ သူ ပင်ပန်းသည် ။
အိပ်ရေးမ၀ဘူး ။ မနက်ကလည်း စန်းစန်းရီဆီကို ပြေးလိုက်ပြီး လဖက်ရည် အတူတူ ထိုင်သောက်လိုက်သေးသည် ။ ညနေပိုင်း ထမင်း အတူတူစားဖို့လည်း ချိန်းခဲ့သည် ။ ဇော်ဇော်ထိုက်က သူ့ကို အလုပ်ကိစ္စတွေကို တခုချင်း ရှင်းပြနေတာတွေကို သူ မျက်လုံးပိတ်ထားပြီးနားထောင်နေသည် ။ သူဖြစ်စေချင်တာတွေကို ဇော်ဇော်ထိုက်က လုပ်ပေးခဲ့သည် ။ ဇော်ဇော်ထိုက်သည် သူ့အားအကိုးရဆုံး တပည့်တယောက် ဖြစ်နေပြီ ။ နယ်မြို့တွေက သူတို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ စက်ရုံတွေ ဆိုင်တွေ ဟိုတယ်တွေရဲ့အခြေအနေကို တင်ပြပြီးတဲ့နောက် ဇော်ဇော်ထိုက်က ဒုတိယကြက်ကြော်ဆိုင် အသစ်အတွက် သူလုပ်ထားတာများကို ရှင်းပြ့ပန်သည် ။ “ ကောင်းတယ်..ဇော်ဇော်ထိုက်…အကုန် ကောင်းတယ် …” နန်းစိုးစံ ရောက်လာသည် ။ “ ဆရာ…ဒေါ်.ကိုကို ဆရာ့ကို တွေ့ချင်လို့ ရောက်နေပါတယ်..ဆရာ..လွှတ်လိုက်ရမလား …” “ အေး..လွှတ်လိုက်..” ဇော်ဇော်ထိုက်လည်း ထိုင်ရာက ထလိုက်သည် ။ “ အကိုလေး..ဒါဆို ကျနော်လည်း လုပ်စရာ သွားလုပ်လိုက်အုံးမယ်…” “ အေး…ကောင်းပြီကွာ…” .ကိုကို သူ့အခန်းထဲကို ၀င်လာသည် ။ ပါးလ်ကိုကို တလှမ်ချင်း လျှောက်လှမ်းပြီး အပြုံးကလေး နဲ့ ၀င်လာတဲ့ပုံလေးက တကယ့်ကို လှပတဲ့ ပန်းချီကား လေး တချပ်ပါ ။ ရင်မို့မို့တွေက မသိမသာ တုန်ခါနေကြသလိုဘဲ ။
“ ကိုကုဋေ…ပါးလ်နဲ့ ဒီနေ့ ညနေစာ စားမှာလားဟင်….” “ ညနေစာက ချိန်းထားပြီးသား ဖြစ်နေတယ်…. ဒီလိုလုပ် ..အခု..နေ့လည်စာ အချိန်ကို ရောက်နေပြီ.. နေ့လည်စာ စားကြမလား…” “ ကောင်းပြီ..စားလေ …” ကုဋေ ရဲ့ သီးသန့်ထမင်းစားခန်းလေးထဲမှာ ကုဋေနဲ့ .ကိုကိုတို့ နံမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်က လာပို့ပေးတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေကို စားသောက်ကြရင်း စကားပြောကြတော့ ကုဋေလည်း .ကိုကိုရဲ့ ပျော့အိတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ အောက်က ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာ မိမွေးတိုင်း ဆိုရင် ဘယ်လိုများ နေလိမ့်မလဲ ဆိုတာတွေးတောလျက် ရှိနေသည် ။ ကုဋေရဲ့ သီးသန့်ထမင်းစားခန်းလေးက သူ့ရုံးခန်းကြီးရဲ့ ဘေးဖက် ကပ်ရက်မှာ ရှိပြီး ဒီ ထမင်းစားခန်းလေး ရှိတာကို သူ့အတွင်းကျကျ တပည့်တွေက လွဲပြီး ဘယ်သူ့မှ သိခွင့် မရှိ ။ နန်းစိုးစံက ကုဋေနဲ့ .ကိုကိုတို့ ထမင်းစားတဲ့အခါ သူ လိုအပ်တာတွေ လုပ်ပေးရမလားလို့ မေးပေမယ့် နန်းစိုးစံကို ဘာမှ လုပ်ပေးစရာ မလိုဘူး လို့ ကုဋေက ပြောလိုက်ပြီး လုပ်စရာ ရှိတဲ့ အလုပ်တချို့ကို လုပ်ဖို့ အပြင်ကို ရဲထွန်းသန်းကို ကားမောင်းခိုင်းလိုက်ပြီး သွားခိုင်းလိုက်သည် ။ .ကိုကို ယူလာတဲ့ ၀ိုင်အနီရောင် တပုလင်းကို ဖေါက်ပြီး သောက်ကြသည် ။ .ကိုကိုနဲ့ သူ အစားတွေကို တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်းလေးဘဲ စားပြီး ၀ိုင်ကိုဘဲ အဓိကထားပြီး သောက်ကြသည် ။ .ကိုကိုက “ ကိုကုဋေ..ငပလီကို ဘယ်တော့ လာမှာလဲဟင် …ကိုကုဋေ လာမလား ဆိုပြီး .က စောင့်နေမိတာ ..ကိုကုဋေ မလာတော့ .ကဘဲ ကိုကုဋေ ရှိတဲ့ ရန်ကုန်ကို ထွက်လာခဲ့ရတာပေါ့..ဟင်းဟင်း….” လို့ ရယ်ပြီး ပြောလိုက်သည် ။ “ အလုပ် မအားဘူး …. ရဲ့…..” လို့ သူပြောလိုက်သည် ။
.ကိုကိုက “ ဘာလဲ ကောင်မလေးချောချောလေးတွေနဲ့ ဟိုသွား ဒီသွား လုပ်နေရလို့လား…..ကြားပါတယ်နော်..ကိုကုဋေ့ သတင်းတွေ …တွဲတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အရမ်းချောလှတဲ့ မော်ဒယ်လ်လေးတွေ ဆိုတာ…” လို့ြ့ပုံးြ့ပုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ သူက “ ကြည့်လေ..အခုလည်း အချောဆုံး မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ ထမင်းစားနေတယ်လေ..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ .ကိုကိုက “ .က မချောမလှပါဘူး …ချောလှတာက ကိုကုဋေ့ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းလေး မဏိလေ…မဏိ…မဏိ…..ဟင်းဟင်း…”လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သူက “ မဏိနဲ့.ကိုကို နှစ် ယောက်လုံးက အချောအလှဆုံးတွေပါ…တယောက် တမျိုးစီ ချောကြလှကြတယ်…..”လို့ ပြောလိုက်ရင်း စားပွဲပေါ် တင်ထားတဲ့ .ကိုကိုရဲ့ လက်ဖြူဖြူသွယ်သွယ်လေးတွေကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်သည် ။ လှပကျော့ရှင်းတဲ့ .ကိုကိုရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ဖယ်ချွတ် ဖယ်ရှား ကြည့်နေသည် ။ သူ့ရဲ့ အကြည့် သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေကို .ကိုကိုက ထွင်းဖေါက် သိရှိနေသလိုဘဲ ။ .ကိုကိုရဲ့ စိုပြောင်ဖေါင်းအိနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလှလှလေးတွေက တစုံတရာကို ငံ့လင့်စောင့်စားနေကြသလိုဘဲ ။ “ ….အရမ်း လှတယ်ကွာ….” “ ဟုတ်လို့လား…လှတော့ ဘာလုပ်ချင်လဲ..ဟင်းဟင်း…” “ ဘာလုပ်ချင်လဲ…ဆိုတော့……ဟင်းဟင်း…..” “ ဘာရယ်တာလဲ..ပြောလေ…ဖြေလေ..ဘာလုပ်ချင်လဲ ဆိာတာ…..ဟင်းဟင်း…” “ နမ်းပစ်လိုက်ချင်တယ်…” .ကိုကိုက ရယ်သည် ။ ပြီးတော့ “ နမ်းချင်နမ်းပေါ့…သူ့သဘောဘဲ…” လို့ ပြောသည် ။
သူတို့ မျက်နှာနှစ်ခု တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်မိသွားသည် ။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို စပြီး နမ်းမိလိုက်သလဲ မသိတော့ဘူး ။ .ကိုကို နဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းချင်း ဂဟေဆက် စုတ်ယူမိနေပြီး ဒီ အနမ်းတွေက ကြာရှည်သွားသည် ။ သူ့လက်ဖ၀ါးတဖက်က .ကိုကိုရဲ့ ချောမွှတ်တဲ့ လက်မောင်းလေးတွေကို အသာပွတ်နေမိရာက ခါးသိမ်လေးကို ဆွဲဖက်လိုက်မိသည် ။ .ကိုကိုကလည်း သူ့ကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်သည် ။ နှုတ်ခမ်းတွေ မခွာချင် ခွာချင်နဲ့ ကွာဟသွားတဲ့အချိန် .ကိုကိုက “ သူ…သူ….အရမ်း နမ်းတတ်တာဘဲ…” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည် ။ ဒီအချိန်မှာ သူ့ လက်ဖ၀ါးက .ကိုကိုရဲ့ ခါးအောက်ဖက်မှာ ၀ိုင်းကားစွင့်သွားတဲ့ တင်ပါးလှလှကြီးတွေအပေါ်ကို ရောက်သွားပြီး ဒီ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်မိနေပြီ ။ သူ့လက်ဖ၀ါးက .ကိုကို ထမိန်ပျော့ပျော့ရဲ့ အောက်မှာ ဘာအတွင်းခံမှ ခံ ၀တ်မထားဘူး ဆိုတာ စမ်းမိသိနေသည် ။ .ကိုကိုနဲ့သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ပြန်ပူးကပ်သွားကြပြန်ရင်း လျာတွေချင်း လုံးထွေးနေတဲ့အချိန် သူ့လက်က .ကိုကိုရဲ့ ပေါင်တန်တွေ အလည်ဗဟိုကို ရောက်သွားရသည် ။
သူ့ကျောပြင်ကို ဖက်တွယ်ထားတဲ့ .ကိုကိုရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက လက်သဲချွန်လေးတွေ သူ့ကျောပြင်သားထဲကို စူးနစ်ကုတ်ခြစ်လာသည် ။ မို့အိဖေါင်းနေတဲ့ .ကိုကိုရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို သူ့လက်ချောင်းတွေ ပီပီပြင်ပြင် စမ်းမိနေသည် ။ကိုင်ပွတ် ဆုပ်နယ်မိနေသည် ။ နှုတ်ခမ်းချင်း ကွာဟအသွား .ကိုကိုရဲ့ ညည်းတွားသံ မပီမသကို တိုးတိုးလေး ကြားလိုက်ရသည် ။ ပြေလုလု ထမိန်လေးရဲ့ အစလေးကို သူဆွဲအဖြည်….“ ဒီနေရာမှာ ကောင်းလို့လားကွယ်..” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အသံလေး ထွက်လာသည် ။ .ကိုကိုရဲ့ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကနေ ဆွဲမထူလိုက်ပြီး “ ကောင်းတဲ့ နေရာ ရှိတယ် …” လို့ သူပြောရင်း အခန်းတံခါးလေး တခုကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ သေးငယ်ပေမယ့် သားနားလှပတဲ့ အိပ်ခန်းငယ်လေး တခန်းကို .ကိုကို တွေ့လိုက်ရလို့ အံ့သြသွားသည် ။ မွေ့ရာထူထူနဲ့ကုတင်ပေါ်ကို .ကိုကိုရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို သူ လွှတ်ချလိုက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ပြေကျွတ်စပြုနေတဲ့ ထမိန်ပျော့လေးကို သူ လက်တဖက်နဲ့ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ အတွင်းခံပင်တီ ၀တ်မထားတဲ့ .ကိုကိုရဲ့ ကိုယ်အောက်ပိုင်း ရဲ့ အလှအပတွေကို သူ အံ့သြတုန်လှုပ်စွာနဲ့ ငေးကြည့်မိရသည် ။ လှလိုက်တာ .ကိုကို ရယ် …။ ဖြူဖွေး အချိုးကျတဲ့ ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးနဲ့ ရှပ်တဲ့ ၀မ်းပျင်အောက်က မို့ခုံးနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်လှလှကြီး ။ အမွှေးရှင်းထားလို့ ဖြူဝင်းရှင်းသန့်နေတဲ့ မိန်းမကိုယ်လှလှကြီးကို ငုံ့ပြီး နမ်းရှုံ့မိတော့သည် ။ “ အိုး…” .ကိုကိုရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေ မှေးမှိတ်သွားသလို နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်းအိအိလေးတွေ ပွင့်ဟသွားသည် ။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူရဲရဲလေးတွေကို အငမ်းမရဘဲ နမ်းမိရသည် ။ သူ့လျာနဲ့ ဖိဖိယက်မိရသည် ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က တင်သားအိအိတွေကို ညှစ်ဆုပ်ထားမိရသည် ။
“ အိုး….ဟင်းဟင်း…….အား…..အား….အား….အား….အား……….” .ကိုကိုရဲ့ ညည်းသံလေးတွေ ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ်လို့ နေတော့သည် ။ နုဖတ်လွန်းတဲ့ .ကိုကို ရဲ့အတွင်းသားနုနုတွေက သူ့လျာထိပ်ကို အတင်းဆွဲယူ ဖမ်းညှစ်နေတယ်လို့ ထင်မိခံစားလိုက်သည် ။ “ တော်ပြီ…မရတော့ဘူး …သူ လုပ်ချင်လည်း လုပ်တော့ကွာ…” .ကိုကိုက ရွှေကြုတ်ကို ဖိယက်စုတ်နေတဲ့ သူ့ကိုရပ်ဖို့ပြောရင်း သူ့မျက်နှာကို လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ တွန်းလိုက်သည် ။ သူ .ကိုကိုရဲ့ ပေါင်ဖြူ ဖြူလှလှ နှစ်ချောင်းကြားထဲက သူ့ခေါင်းကို ခွာလိုက်သည် ။ သူ ဒူးထောက်ရက်နဲ့.ကိုကိုရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားထဲကို နေရာဝင်ယူလိုက်သည် ။ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ တိုးဝင်လိုက်တာကြောင့်.ကိုကိုရဲ့ ပေါင်တန်တွေက ဘေးတဖက်တချက်ကို ပို ကားဖြဲပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားရသည် ။ အချိန်ဆွဲမနေဘဲ သူ့ဖွားဖက်တော်နဲ့ .ကိုကိုရဲ့ အင်္ဂါစပ်တို့ကို မိတ်ဆက် တွေ့ဆုံပေးလိုက်သည် ။ .ကိုကိုက သူ့လည်ဂုတ်ကို ဆွဲဖက်လိုက်သည် ။ သူ့ဖွားဖက်တော် တိုးဝင်မှုကြောင့် .ကိုကိုရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး တုန်ခါသွားသလို သူမနုတ်ဖျားက ညည်းငြူသံလေး ထွက်ပေါ်လာသည် ။ သူမရဲ့မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ကျဉ်းကြပ်နူးအိတဲ့အထိအတွေ့တွေကြောင့်မရပ်မနား ဆက်တိုက် အသွင်းအထုတ်တွေ လုပ်မိနေသည် ။ သူထိုးသွင်းလိုက်တိုင်း တုန်ခါသွားကြတဲ့ သူမရဲ့ ဖွံ့ထွား လု့းဝန်းတဲ့ ရင်သားလှလှဖြူ ဖြူကြီးတွေကို ငုံ့ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ဟတ်စို့မိရသည် ။နို့သီး နီနီလေးတွေက တင်းမာပြီး စူထောင်ထွက်နေကြသည် ။ သူစို့တဲ့အချိန် သူမရဲ့ ညည်းသံတွေ ပို ကျယ်လောင်လာသလို သူ့ကျောကို လက်သဲလေးတွေနဲ့ ကုတ်ခြစ်တာတွေ ပိုကြမ်းလာသည် ။
“ အား…..အားရှီး….အင်း……..အိုး………အား…အား…….အင်..အင်…….. ဆောင့်ထည့်ချက်တွေ ပိုမြန်လာသည် ။ ပြင်းထန်လာသည် ။ အဲကွန်းလွှတ်ထားတဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲမှာ သူ့နဖူးက ချွေးပေါက်တွေ စီးကျလာသည် ။ ကောင်းလားဟင်…. အင်း..အင်း…… မြန်မယ်နော်….. အင်း..အင်း…….. အား…အား…..အား…………အိုး…….ဟင်း……. ဆက်တိုက် မရပ်မနား ဒလစပ်ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့်သူတို့ အတူတူလို ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် လိုရာပန်းတိုင်ကို တက်ရောက် လှမ်းတက်သွားကြတော့သည် ။ စန်းစန်းရီ တနေ့လုံး အလုပ်လုပ်နေတုံး သူ့အကြောင်းကိုဘဲ စဉ်းစားနေမိသည် ။ သူ့ကို မြင်ယောင်နေသည် ။ ဆရာဦးပေါ်လွင်ကလည်း သူ့အကြောင်းမေးသည် ။ ငါတို့ ဘယ်တော့ စားကြရမှာလဲ လို့ ရယ်ပြီး မေးသည် ။ စန်းစန်းရီကို စိတ်လျော့လိုက်ပါ..သူက လူကောင်းတယောက်ပါ စန်းစန်းရီ …သိပ် အချိန်ဆွဲမနေနဲ့ဟာ..သူများနောက်ကို ပါသွားအုံးမယ် လို့ ပြောသည် ။ ဒီနေ့ညနေ သူက ထမင်း အတူတူ စားကြဖို့ ချိန်းထားသည် ။ သူ စကာလည်း ပြောချင်သည် တဲ့ ။ သူ့ကို ပြန်ချစ်မလား လို့ သူ ထပ် မေးလာခဲ့ရင် စန်းစန်းရီ ဘာဖြေမလဲ ။ အချိန်တွေလည်း ကြာလာပြီ ။ စန်းစန်းရီလည်း မလိမ်ညာတမ်း ပြောရရင် သူ့၇ုံးခန်းကို တိုက်ပုံတွေ သွားပို့တဲ့ အချိန်လောက်ထဲက စန်းစန်းရီ သူ့ကို သဘောကျ ချစ်ခဲ့မိတာပါ ။ နောက်တော့ ဘန်ကောက်မှာ အမေ့ကို ဆေးကုပေးခဲ့တဲ့ အချိန် သူ့စေတနာတွေကို ပိုပြီး နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရပြန်တော့ သူ့ကို ရင်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မိခဲ့ရတာပါ ။ ဘီလျံနာ တယောက်မို့ သူ့အခြေအနေနဲ့ ကိုယ့်အခြေအနေ ကွာဟမှုတွေကြောင့် သူ့ကို မချစ်ရဲဘူးလို့ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါသည် ။ သို့ပေမယ့် သူ့ကို မေ့ဖျောက်လို့ မရနိုင်ဘဲ သူကဘဲ စန်းစန်းရီ စိတ်တွေ အတွေးတွေကို အမြဲ ချယ်လှယ်နေပြီ ။
သူနဲ့ မတွေ့ရတဲ့ ရက်တွေက စန်းစန်းရီအတွက် ဝေဒနာနေ့ရက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရသလို သူနဲ့ တွေ့ကြရင်လည်း စန်းစန်းရီ သူ့အနားမှာဘဲ နေလိုက်ချင်တော့တဲ့စိတ်တွေက သူ့ကို စန်းစန်းရီ သိပ်ချစ်နေတယ် ဆိုတာ ပြသထင်ရှားနေသည် ။ ညနေခြောက်နာရီတိတိမှာ သူ့အဖိုးတန် ကားအနက်ရောင်ကြီး စန်းစန်းရီတို့ ဆိုင်အရှေ့ကို ထိုးဆိုက်လာသည် ။ စန်းစန်းရီလည်း သူလာရင် အဆင်သင့် လိုက်သွားနီုင်အောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားနှင့်တော့ သူ့ကား ရောက်လာတာနဲ့ စန်းစန်းရီ သူ့ကားဆီကို အပြေးကလေး ထွက်လာခဲ့မိလိုက်သည် ။ “ စန်းစန်းရီ…..” “ ဦးကုဋေ…..” “ စန်းစန်းရီ..အဲလို မခေါ်နဲ့တော့ကွာ…” သူ့အသံတွေက တိုးသည် ။ မောပန်းနေတဲ့ ပုံ ။ သူ အလုပ်တွေ တအားများလို့လား မသိဘူး ။ ကားပေါ်ကို တက်လိုက်ရင်း..“ ဘယ်လို ခေါ်ရမှာလဲ….” လို့ သူ့ကို ပြန်မေးလိုက်မိသည် ။ “ ကိုကို…..ကိုကို လို့ ခေါ်…” စန်းစန်းရီ ပြုံးမိသည် ။ သူ့ပုံက အပိုင်ကြီး ..။ ဟွန်း..မုန်းစရာကြီး ….။ “ ခေါ်ပါဘူး….” သူ စန်းစန်းရီ ဆီက ရသွားတာက မျက်စောင်း ။ မျက်စောင်းလှလှလေး ။ သူက သဘောပေါက်သည် ။ တကယ်မုန်းလို့ ထိုးတဲ့ မျက်စောင်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သူ သိသည် ။
“ ဘယ်မှာ ထမင်းစားကြမလဲဟင်..စန်းစန်းရီ….” “ သူ့သဘော..သူစားချင်တဲ့နေရာမှာ စား….စန်းစန်းရီက ဘာဖြစ်ဖြစ် စားမှာ….” “ ဟုတ်ပြီ..ဒါဆို….မြန်မာထမင်းဆိုင် သွားစားမယ် …အိုကေလား..” “ သူ့သဘောပါဆို ….” သူ သင်္ကန်းကျွန်း ဖကက ခိုင်စိုးစိုး ဆိုတဲ့ မြန်မာထမင်းဆိုင်ကို ခေါ်သွားသည် ။ သူ စားနေကျလား မသိဘူး ။ ဆိုင်က သူမမှာဘဲနဲ့ ဟင်းတွေ လာချပေးနေသည် ။ သူကြိုက်တတ်တယ် ပြောဖူးတဲ့ ဟင်းတွေ ။ စန်းစန်းရီ ကြိုက်တဲ့ ဟင်းတွေလည်း ပါသည် ။ “ သူ ဘယ်လိုသိလဲ..စန်းစန်းရီ ဒီဟင်းတွေ ကြိုက်တယ် ဆိုတာ…..” “ သိတာပေါ့..စန်းစန်းရီ အကြိုက်တွေ မကြိုက်တာတွေ အကုန်သိ …ကဲ..စား..စား…..” တကယ့်ကို ဟင်းတွေ စုံတဲ့ ဆိုင်ပါ ။ လာစားတဲ့ လူတွေ လိုတာ အကုန်ရသည် ။ စားလို့ မြိန်လိုက်တာ အရမ်းဘဲ ။ သူက “ ပျော်လား..” လို့ မေးသည် ။ စန်းစန်းရီ “ ပျော်တယ်….သူရော..” လို့ ဖြေလဲဖြေ ပြန်လဲ မေးလိုက်တော့ သူက “ တအား ပျော်တာပေါ့….ထမင်း အတူတ စားကြရလို့ တင် ဘယ်ကမလဲ….ဒီနေ့ က ပျော်စရာနေ့တနေ့ အဖြစ် ဒို့ ဘ၀မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားရမယ့်နေ့လေ…..” လို့ ဖြေသည် ။ ပြောသည် ။
“ ဘာနေ့မို့လဲ….” “ ချစ်သူဖြစ်သွားကြတဲ့ နေ့…လေ….ချစ်သူဆီက အဖြေရတဲ့နေ့……” “ အံမယ်…အံမယ်…..သူ့ကို ဘယ်သူက အဖြေပေးသေးလို့လဲ…..မေးကော မေးသေးလို့လား…..” “ လာမယ်လေ…လာမယ်..ကဲ..ထညက်ခဲလေး ဘာလေး စားလိုက်ပါအုံး….စန်းစန်းရီ…..” ထမင်းဆိုင်ထဲကနေ ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ သူက စန်းစန်းရီကို ခြံဝင်းကြီး တ၀င်းထဲကို ခေါ်သွားသည် ။ သေသေသပ်သပ် နဲ့ ရှင်းလင်းပြီး မီးတွေ ထွန်းထားတဲ့ ခြံကျယ်ကြီး ။ လူတယောက်မှ ရှိမနေဘူး ။ ကားကို ရပ်ပြီး လမ်းကလေးအတိုင်း သူနဲ့ စန်းစန်းရီ လျှောက်ဝင်သွားကြသည် ။ ဟိုး ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ အဆောက်အဦးကြီးတခုကို လှမ်း မြင်လိုက်ရသည် ။ ခေတ်မှီ တိုက်သစ်ကြီး တလုံး ။ ဘေးမှာက မီးတွေ ထွန်းထားတဲ့ ပြာလဲ့နေတဲ့ ရေကူးကန်ကြီး တကန် ရှိနေသည် ။
“ ဒါ ဘယ်သူ့ အိမ်လဲဟင်….ဟိုတယ်ကြီး လား…” “ကဲ လာ..ရေကန်နားမှာ သွား ထိုင်ကြမယ်…..” သူက စန်းစန်းရီ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ခေါ်သွားသည် ။ “ ထိုင်….” “ သိပ် သာယာတာဘဲနော်…..” “ အင်း…ကြိုက်လား….” “ ကြိုက်တယ်…ဘာလဲ..၀ယ်ပေးမလို့လား…..” သူက ရယ်သည် ။ “ ၀ယ်ပေးစရာ မလိုဘူးလေ…..ဒါ ဒို့ အပိုင်ဘဲ…..” “ ဟင်..အသစ်စက်စက်ကြီးလိုဘဲနော်….၀ယ်လိုက်တာလား…” “ နောက်မှမေး..အရင် စန်းစန်းရီကို မေးချင်သေးတယ်…” “ ဘာမေးမှာလဲ….မေးလေ..” “ ဒို့ စန်းစန်းရီကို သိပ်ချစ်တာဘဲ..ချစ်နေတာ ကြာပြီ ….မေးပြီးသား မေးခွန်းကိုဘဲ ထပ်မေးချင်တယ်..စန်းစန်းရီ ဒို့ကို ပြန်ချစ်မလား….လက်ထပ်မလား….” စန်းစန်းရီ ထင်တော့ ထင်သားဘဲ ။ သူမေးမယ် ဆိုတာ ။ စန်းစန်းရီ သူ့ကို စိုက်ကြည့်ပြီး..“ ဖြေမယ်….” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည် ။ “ ပြန်ချစ်လားဟင်….” လို့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး မေးသည် ။ “ အင်း..ချစ်တယ်….” လို့ စန်းစန်းရီ ဖြေလိုက်သည် ။ သူ သိပ်ကို ပျော်သွားသည် ။ “ အိုး..၀မ်းသာလိုက်တာ…..” လို့ ပြောပြီး စန်းစန်းရီကို ဖက်လိုက်သည် ။
“ ဟိတ်..လွှတ်အုံး….စန်းစန်းရီ သူ့ကို ချစ်တယ်….လက်တော့ ချက်ချင်း မထပ်ချင်သေးဘူး …စန်းစန်းရီ အလုပ် လုပ်ချင်သေးတယ်……” “ ဟားဟား..စန်းစန်းရီက ဘာတွေ လုပ်မှာလဲ……လုပ်စရာ မလိုပါဘူး..စန်းစန်းရီ လိုချင်တာ လက်ညှိုး ထိုးလိုက်ရုံဘဲ……မြန်မာပြည်မှာ တင် မကဘူး..ကမ္ဘာ့အတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်း စန်းစန်းရီ လိုချင်တာတွေ အကုန် ၀ယ်ပေးနိုင်တယ်…..” “ အမလေး..ကြွားနေပြန်ပြီ….သိပါတယ်ရှင်..ရှင် ချမ်းသာတယ် ဆိုတာ….စန်းစန်းရီက ကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ချင်တာ….” “ လုပ်ပေါ့…..စန်းစန်းရီ လုပ်ချင်တာ လုပ်…ခွင့်ပြုတယ်…ဒီခြံနဲ့ တိုက်သစ်ကြီးက စန်းစန်းရီနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နေကြဖို့….ဆောက်နေတာ ကြာပြီလေ..အခု အကုန်ပြီးသွားပြီ…..” “ အရမ်းကောင်းတာဘဲ..စန်းစန်းရီ ကြိုက်တယ်…..” “ ဒါဆို..ကြည့်လေ..ကိုယ် ပြောသားဘဲ..ဒီနေ့ဟာ ကိုယ်တို့ ချစ်သူ စဖြစ်သွားကြတဲ့ နေ့ကလေး ပေါ့….” “ အင်း….ဟုတ်တယ်…..” “ ချစ်သူနဲ့ စစချင်း နမ်းမိကြတဲ့ နေ့လေးရော မဖြစ်ချင်ဘူးလား..” “ ဟိတ် လူလည်မကျနဲ့ကွာ….ကဲကိုကဲတယ်….ဘီလျံနာ ကိုကို နော်…..” “ ဟားဟားဟား……..” ကုဋေတိုးပွားရဲ့ ရယ်သံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ခြံဝင်းကြီးထဲမှာ ကျယ်လောင်လှသည် ။ “ ကိုကို…..” “ ဟင်..စန်းစန်းရီ….ပြော…” “ ကွယ်ရာမှာ ခြေမများရဘူးနော်….” “ အင်း…” “ စန်းစန်းရီအပေါ် သစ္စာ ရှိရမယ်နော်…” “ အင်း….” “ ဘာအင်းလဲ…” “ သစ္စာရှိမယ်….” “ တခြား မိန်းမတွေကို စကားမပြောရဘူး..မချစ်ရဘူးနော်…..” “ စိတ်ချ…..စန်းစန်းရီ တယောက်ထဲကိုဘဲ ချစ်မယ်…..” ပြီး
Previous Previous post: ညဆို
Next Next post: ထိုင်း ချဲလ်(၃) လုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု “(ကံကောင်းကြပါစေ)။ မကြည့်အားသေးရင် ရှယ်ယူထားလိုက်ပါ